လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ Tender No. 12 & 13 / EPGE/ 2018-2019 အား တင်ဒါပိတ်ရက်ပြင်ဆင်ခြင်း
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ Tender No. 12 & 13 / EPGE/ 2018-2019 ၏ Technical Proposal များခေါ်ယူ ခဲ့ခြင်းအား (၂.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့နှင့် (၃.၁၀.၂၀၁၈)ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာနှင့် ကြေးမုံသတင်းစာတွင်လည်းကောင်း၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန Web Portal ၌ (၂-၁၀-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း (http://www.moee.gov.mm/mm/ignite/contentView/1055) ထည့်သွင်းကြေငြာ တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ၎င်းတင်ဒါအား တင်ဒါပိတ်ရက် (၃၁.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့အစား (၁၄.၁၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့၊ (၁၄:၀၀)နာရီဟု ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ် ကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။
ဖုန်း- ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉